Nzira dzakasiyana dzekushanyira kambani yekorosi
Kubva kuVirtual Tours kusvika Pausiku Huchagara, Dzidza Zvose Nekambani Yakashanya
Kuti uratidze kushanda kunobudirira kune kojiji yakasarudza kana yunivhesiti, unoda kuziva chikoro zvakanaka. Chikamu chinoshanyira chikamu chinokosha chekuita. Apo iwe unonyanya kushandisa chikoro chako kushanyira , iwe uchanzwa kana chikoro chiri chimiro chakanaka kwauri, uye iwe uchawana ruzivo rwekunyora nekunyora zvinyorwa zvedzidzo yekushandisa. Uyewo, kushanyira kwako kunowanzoisa iwe kuchikoro chekutsvaga chekufambisa software uye rubatsiro runoratidza kuti kufarira kwako pachikoro hakusi kungofanana nekunaka kana kuti kwenguva refu.
Zviise iwe pakuona kwekoroji: iwe unenge uchida kubvuma vadzidzi vari kuita sarudzo yakagadzikana pamusoro pekambani yenyu uye avo vakapa nguva uye simba mukusarudza kushanda kuchikoro chenyu.
Makoroji anowanzotya ne "vashandi vanoita basa" - vaverengi vasingatauri nechikoro kusvikira chikumbiro chichisvika. Vanyori vakadaro vangangodaro vachishanda chete nokuti mubereki anoda kuti vaite, kana kuti nokuti zviri nyore kushandisa kushandisa kuvonga zvakadai seCommunity Application uye pasina Cappex Application .
Kambani yekushanyira inzira yakanaka yekudzidza zvakawanda pamusoro pekoroji, rega kuva mumiririri wekunyengera, uye kuratidza kufarira kwako zvakanaka. Kuti uwane kuti ndeupi rudzi rwekushanyira makoroji ako anotarirwa, tarisai mawebsite ezvo kana kuti usvike kuchikoro chako chekudzidzisa mazano kune mamwe mashoko pamusoro pezvingave zviripo munzvimbo yako.
Pasi apa unogona kudzidza nezvedzimwe nzira dzingangosvika yekushanyira kojiji.
Rwendo rwekambani chikamu chinokosha chekugadzirira koroji. Steve Debenport / E + / Getty Images
Kushanyirwa kwekambani ndiyo iyo inowanzoshandiswa yekoroji kushanya, uye inopa zvikomborero zvakawanda. Kune imwe, inowanzotungamirirwa nemudzidzi wezvino, kuitira kuti iwe uwane mudzidzi maonero pajiji. Uyewo, vanowanzogoverwa mukati mevhiki uye pamagumo evhiki, naizvozvo ivo vanowanzova nyore kuti vakwanise kufambidzana nepamapurogiramu akabatikana evadzidzi vekusekondari.
Shandisa zvakanakisisa rwendo rwako kuburikidza nekubvunza mibvunzo yako yekufambisa iyo ichakubatsira iwe kunzwisisa korojiji zviri nani uye kuti yakakodzera iwe here.
Tarisira kutarisa kwekambani kutora awa kana kupfuura.
Purogiramu yemashoko inogona kuva nzira yakanaka yekudzidza zvakawanda nezvekoroji. Hero Images / Getty Images
Chikoro chemashoko ehurumende chinowanzova chechimiro kupfuura marashiro eusasa, uye anopiwa zvishoma nezvishoma, kazhinji paMugovera uye osarudza Chishanu. Kuenda kunogona kubva kune boka duku kusvika kumazana evadzidzi zvichienderana nechikoro uye nguva yegore. Ruzhinji rwemasangano ehurongwa runotungamirirwa nenhengo yevashandi vanobvuma, asi iwe uchasanganawo nevamwe vanotungamirirwa nevadzidzi, VaDhean, kana kusanganiswa kwevashandi nevadzidzi.
Pachirongwa chekuziva, unogona kutarisira kudzidza nezvekoroji yezvinhu zvakasiyana-siyana uye mikana inopa vadzidzi, uye iwe unogonawo kuwana mazano ekushandisa uye mari yekubatsira rubatsiro. Ikoko pachava nenguva yekubvunza mibvunzo, asi kumapoka makuru mapeji akazaruka angave akaoma.
Chikoro chekudzidzira chikoro chinowanzotora maminitsi 60 kusvika kuzana, uye iwe unowanzova nemukana wekurara shure kwekubvunza vashandi chero mibvunzo chaiyo yaunogona kuva nayo.
Pete / Flickr / CC BY-SA 2.0
Kazhinji munaAugust uye kuwa, makoroji achaita dzimba dzakasununguka dzimba dzekudzidzira dzevadzidzi vanozove. Izvi zviitiko zvinogona kunge zvakaoma kune vadzidzi vekusekondari kuronga kubva pavanopiwa kamwe chete pagore, asi zvakakosha kuedza kushanda kana kana zvichibvira.
Vhura dzimba dzinogona kuva hafu yezuva kune zviitiko zvezuva rose. Kazhinji ivo vanozobatanidza hurukuro yavose yehurongwa uye rwendo rwekambani, asi vachazobatanidza zviitiko zvakadai sekudya kwemasikati nevadzidzi uye masangano, musangano nemari yezvemari, zvidzidzo zvepamusoro uye mabasa, zviitiko-zvakashanyira-zviitiko uye zviitiko, uye mapeji evanodzidza-mudzidzi uye kukurukurirana.
Nokuti imba yakazaruka inokupa nzira dzakasiyana-siyana dzokuwana ruzivo uye kubatanidza nevashandi, vadzidzi, uye chikwata, iwe unogona kunge uchiuya nehana iri nani pane yekoroji pane iwe ungadai uchitevera rwendo rwechiitiko kana sangano remashoko.
Muchirimo, makoroji anowanzotora mhando dzakafanana dzedzimba dzakasununguka chete kune vadzidzi vakagamuchirwa. Iyi dzimba dzakasununguka inguva yakakosha yekushandisa kukubatsira kusarudza kukoreji yaunopinda.
Iko kushanya kweusiku husiku hwose ndiyo ndiyo nzira yakanakisisa yekuzoziva kukoreji. Zvifananidzo - Hill Street Studios / Brand X Mifananidzo / Getty Images
Kuratidzwa kweusiku humwe ndiyo yegoridhe yemusasa wekushanyira, nekuti hapana nzira iri nani yekuwana manzwiro ekoroji uye maitiro ayo. Kana zvichikwanisika, iwe unofanirwa kuita imwe usati waita sarudzo yako yokupedzisira yekoroji.
Panguva yekushanya kweusiku husiku, iwe uchadya muimba yekudyira, uchirara muimba yekugara, shanyira kirasi kana maviri, uye sangana nevadzidzi vasina kubhadharwa kuti vakuitire zvakanaka. Muchengeti wako achave akasarudzwa nevashandi vanobvumirwa sekusimudzira uye mumiririri akanaka kunekoroji, asi vamwe vanhu vamunosangana navo panguva yekugara kwenyu hazviiti.
Pamakorikari akasarudzwa, kushanyira kwemasikati kunowanzosarudzwa chete mushure mokunge mave muchibvumirwa. Zvikoro zvepamusoro hazvina zvigadziro zvakakwana kuti zviwane zvikumbiro kubva kuzviuru zvevadzidzi, vazhinji vavo vasingatombobvumirwi. Pazvikoro zvisingasarudze, kugara kweusiku kunogona kuve sarudzo chero ipi zvayo mumatendero ekubvuma.
Kushanyira bhazi yekorosi inogona kuva nzira yakakosha uye ine mari yekushanyira misasa. Hinterhaus Productions / DigitalVision / Getty Images
Bhuku rebhasi harifaniri kusarudzwa kune vese vadzidzi vekusekondari, nokuti vanowanzowanzove vakajairika munzvimbo dzine vanhu vakawanda. Kana iwe uine mukana wekufambisa bhazi, inogona kuva nzira yakanaka yekushanyira chikoro kana zvikoro zvakawanda.
Bushanyi yebhasi inogona kutora maitiro akawanda: dzimwe nguva koreji inopa bhazi kune vadzidzi vanofarira vanobva kune imwe nzvimbo; dzimwe nguva chikoro chesekondari kana kambani yega yega inoronga rwendo rwemakambani akawanda; dzimwe nguva zvikoro zvakawanda zvinoshandisa zviwanikwa zvekuunza vadzidzi kune imwe nzvimbo yekushanyira makambani avo. Zvikoro zviri kunze kwenzvimbo-nzvimbo zvinonyanya kushandisa bhafisi dzebhazi senzira yekuwana vadzidzi vanotarisira kumakambani avo.
Bushanyi dzebhasi dzinogona kufara uye kushamwaridzana kwevanhu, uye vanogona kuva nzira yehupfumi yekushanyira makoroji. Vamwe vachave vakasununguka (vanobhadharwa nemakoroji), uye mamwe acharamba achinyanya kudhura kupfuura kana iwe waizozvifambisa uye ugoita urongwa hwako hwekugara. Vanorongawo kuronga rwendo rwenyu nyore, nokuti varongwa vekushanyirana vachagadzirira marwendo enyu emusasa uye zvidzidzo zvemashoko.
Chikoro chekoroji chinobatsira pakuunganidza mashoko pamusoro pezvikoro zvakawanda. COD Newsroom / Flickr / CC BY 2.0
Zvikoro zveChikoro zvinowanzoitwa pachikoro chesekondari kana imwe nzvimbo huru yemunharaunda. Kunyange kana pasina zvikomborero kuchikoro chako, unogona kuwana imwe munzvimbo yako. Chikoro chekoroji chinokupa nzira yekuunganidza ruzivo pamusoro pemakoroji mazhinji, uye iwe uchava nemukana wekutaura nemumiririri wezvikoro anokufarira. Vanogona kuva chiito chekutanga chekutanga pakutsvakurudza kwekoroji yako, kunyange iwe unoda kutevera nevekambiso yekushanyira kune zvikoro izvo iwe unofunga kuti zvingave zvakakwikwidza iwe.
Usava nehanya pamakorojiji uye ugare kungotora mabhurocha. Taura nevamiririri uye tora zita rako pane zvinyorwa zvemashoko aya maunoda. Izvi zvinokutora iwe mudhipatimendi yekombiyuta kuhofisi yekubvuma, uye icharatidza kuti wakanga uine ushamwari nomumiri wechikoro usati waisa.
Chikoro Endai Kunzvimbo Yenyu Yakakwirira
Dzimwe nguva mudzidzisi wekoljiji anoshanyira chikoro chako chesekondari. Zvifananidzo - Hill Street Studios / Brand X Mifananidzo / Getty Images
Mahofisi emakoreji emakerekani ane boka duku revarayiri vanopedza kugwa mumugwagwa vanoshanyira zvikoro zvepamusoro. Mutungamiri mumwe nomumwe anogoverwa kune imwe nzvimbo yenharaunda nechinangwa chekushandira kune avo vanozove vadzidzi vari munzvimbo iyoyo.
Apo mumiririri wekoljiji anoshanyira chikoro chako, kushanya ikoko kunogona kutora maitiro akasiyana. Dzimwe zvikoro zvine gungano rakazaruka kune vese vadzidzi. Zvinowanzoitika, mumiririri anenge ari mune imwe nzvimbo yakadai semakamuri emusangano kana kuti raibhurari, uye vadzidzi vanofarira vanogona kuenda kunosangana nomuridzi wekugamuchira panguva yemangwanani kana imba yekudzidza.
Tora zvido zvekushanyira uku kana zvikaitika. College counselors vanoda kuziva newe (ndicho chikonzero ivo varipo, shure kwezvose), uye iyi ndiyo imwe nzira yekudzidza zvakawanda nezvechikoro uye kuwana zita rako muchikoro chekutsvaga chikoro. Kana iwe ukakwanisa kuvaka ukama nemunharaunda wako wekuchera, munhu iyeye anogona kuenda kundokurudzira iwe kana maitiro ekubvumirana ari kuitwa.
Shoko Rokupedzisira Pamisasa Yevashanyi
Iva nechokwadi chekufamba kubva pamusasa wako mushanyi nemashoko akawanda sezvaungaita. Hill Street Studios / Tobin Rogers / Blend Images / Getty Images
Pasinei nokuti unosangana nemupi wepachikoro chako chesekondari kana kurara usiku hunojijiji, iva nechokwadi chokuti iwe unouya nekunzwisisa zviri nani chikoro, uye unoshanda kuti uite hukama hwakanaka uye hwomunhu oga nechikoro. Zvaunofambidzana nechikoro zvinosvika pamakoroji akawanda, uye kushanyira kambasi uye misangano nevashandi vanopindira ndeimwe yenzira dzakanakisisa dzokuratidza kufarira . Kuvaka ukama nemumiririri wekoroji uye kuedza mukuziva kuti chikoro chakanaka chinogona kutamba iwe
Kunyange zvazvo pfungwa iyi ingave yakajeka, nguva yakawanda yaunopedza mumusasa, zviri nani kunzwisisa kwako kwekoroji ichave. Ndokusaka dzimba dzakazaruka uye kutariswa kweusiku ndidzo midziyo inobatsira yekufungidzira kana kojiji inofananidzwa nekunaka kwako uye unhu hwako.
Virginia Tech Photo Tour
Photo Tour of NYU, New York University
Yunivhesiti kuBuffalo Photo Tour
Chii chinonzi Zooplankton?
Online Memory Kugovana
A Tantric Master's View of Tantra
Mitemo yePurezidhendi Pardons
Nzira Yokuita Sei Kujeka MuGima Rema
Pamusoro Rhode Island Colleges
Ban Chiang - Bronze Age Village and Cemetery in Thailand
Mashandisiro Aungaita Kushandiswa Kunowanikwa neBinomial Distribution
Mazano Okusarudza Anopinda Mutevedzeri
Ndechipi Chishanduro Chinoti?
Genghis Khan Ratidza Mifananidzo
Kwenguva Ipi Majeremusi Anorarama?
Atomic Bomb Cake Recipe
Yakanakisisa ye "Shit Baba Vangu Anoti" pa Twitter
Sound Scripting - Word Stress uye Intonation
Achishandisa String uye Bubbles kuisa Windshield
10 Zvinotyisa uye Zvisingatauriki Paranormal Stories Stories
Chinangwa muRhetoric nekuumbwa
Ryder Cup Aces: Ndeapi Mahombe-Mu-Mumwe, uye Ndiani Akasika Yokutanga?
Mapeji emabhadharo edzimhosva anogadzirisa mapurisa
Chii chinonzi Enthalpy mu Chemistry uye Physics?